Lo mqondo ubonisa ukuthi uhlelo Lwesimo Sezulu lungabukeka kanjani ku-iPadOS | iPhone News
U-Angel Gonzalez | 27/04/2022 17:00 | iOS, iPad
I-iPadOS Ifike njengohlelo lwayo lokusebenza lwe-iPad eminyakeni embalwa edlule. Kodwa-ke, kuze kube yileso sikhathi i-iOS yajwayelana nezidingo zawo wonke ama-iDevices ngenhloso yokuhlinzeka nge-ecosystem eqhubekayo ephelele. Kodwa kwakukhona ukulinganiselwa okuthile. Iminyaka eminingi, abasebenzisi balinde uhlelo olusemthethweni Lwesimo Sezulu ukuthi lufike kusikrini esikhulu se-iPad. Ngokuphambene nalokho obekulindelekile, asikaze sibone inhlansi yethemba lokuthi i-Apple izoletha uhlelo lokusebenza ku-iPad. Lo mqondo omusha ubonisa ukuthi uhlelo lokusebenza Lwesimo Sezulu lungabukeka kanjani ku-iPad nokuthi yiziphi izici ezengeziwe ezingethulwa.
Ingabe i-iPadOS 16 izoba yisibuyekezo esifaka uhlelo lokusebenza Lwesimo Sezulu lwe-iPad?
Lo mqondo omusha oshicilelwe nguTimo Weigelt in Behance isampula ukuthi uhlelo Lwesimo Sezulu lungabukeka kanjani ku-iPad. Uma uthi nhlá kubukeka njengekhophi elula phakathi kohlelo lokusebenza lwe-iOS esikrinini esikhudlwana. Nokho, umehluko omncane owethulwa kuwo wonke umqondo unganikeza okhiye bokuhlukanisa lezi zinhlelo zokusebenza ezimbili.
Okokuqala, amabhulokhi wolwazi angenziwa ngendlela oyifisayo njengokungathi amawijethi ngokungeza, isibonelo, 'imvula' noma 'isiqondiso somoya'. Ngalo msebenzi singavumela khiqiza izikrini zesikhathi zangokwezifiso ngokusekelwe kudatha esingathanda ukuyazi nganoma yisiphi isikhathi. Nami ngiyazi izokwethula imodi yokwakheka kwezwe entsha njengoba uhlelo lokusebenza olusemthethweni lungenawo ukwakheka kwezwe. Lo mklamo uzobukeka umuhle esikrinini se-iPad ngedizayini yekholomu ekabili lapho izindawo ongabonisana kuzo zibe kwesokudla kanye nolwazi lwesimo sezulu kwesokunxele.
I-iOS 16 izoletha izinguquko ezinkulu kuma-Focus Modes
Ngakolunye uhlangothi, engeza amamephu amasha ahambayo ehlukile kulezo zomoya nemvula ezinganikeza ulwazi olwengeziwe kubasebenzisi. Futhi, ekugcineni, kungezwe uphawu oluncane lokuthi uhlelo lokusebenza luzodalwa ngeCatlyst, nayo ingavumela ukuletha uhlelo lokusebenza lwesimo sezulu ku-macOS entsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » Lo mqondo ubonisa ukuthi uhlelo lokusebenza Lwesimo Sezulu lungabukeka kanjani ku-iPadOS
Izesekeli ezinhle kakhulu zemikhiqizo yakho ye-Apple